Udonga olukhulu oluhlaza lwaseSahara olumelene nokugwaduleka | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Udonga olukhulu oluhlaza lwaseSahara olumelene nokugwaduleka
UClaudi Casal | | Ukuguquka kwesimo sezulu, Isimo sezulu
Uhambo lodonga oluhlaza
Isaqhubeka, futhi intuthuko kabani yaqala eminyakeni eyishumi edlule, le phrojekthi ukuthi weqa amazwe ayi-11 Izalwe ngenhloso yokumisa ukuthuthuka kokugwaduleka kule ndawo enkulu yase-Afrika. Yaziwa njengeGreat Green Wall yase-Afrika, noma i-Initiative yeGreat Green Wall yaseSahara naseSahel. Igoli lakho lilula, kepha likhulu. Ixhaswe ngezigidi ezingama-7.000 cishe ama-euro, lolu donga luhlose ukumboza Amakhilomitha ayi-8.000 ubude no-15 ububanzi. Ukuthola umbono, ingqikithi yamakhilomitha-skwele ayi-120.000. Lilingana cishe nekota yobukhulu beSpain!
Futhi inenhloso ephindwe kabili. Ngakolunye uhlangothi lokho kwe- vimbela ugwadule ekuqhubekeni phambili, nakwelinye ukunciphisa imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu. Ukutshala izigidi zezihlahla kunezinzuzo eziningi, futhi ama-acacias akhethwe njengesihlahla akuyona ingozi. Bamelene kakhulu nesomiso futhi nomthunzi wabo usiza ukonga amanzi ezindaweni ezikhulayo. Phakathi kwemihlomulo yayo kukhona nokuthi abantu abaningi kumele bashiye lezi zindawo ngenxa yokushoda kokudla.
1 Iphaseji eliluhlaza, umqondo ocishe ube yikhulu leminyaka
2 Ngabe kulungile ukushintsha i-ecosystem ngokuthanda?
3 Ngabe ezinye izindlela zingacatshangelwa?
Iphaseji eliluhlaza, umqondo ocishe ube yikhulu leminyaka
Naphezu kokusha, Lo mbono uhlehlela emuva ku-1927. Unjiniyela Wasehlathini WaseFrance ULouis Lavauden wasungula igama elithi "ukwenziwa ihlane" ukuchaza ukuthi izingwadule ziqhubekela phambili ngenxa yokuxhashazwa kwezolimo nokucekelwa phansi komhlaba owomile. Eminyakeni engama-25 kamuva, ngo-1952, umqondo wokuthuthukisa izimo zokuphila eSahara awuzange unyamalale. Omunye unjiniyela wamahlathi, iNgisi uRichard USt. Baber Baker uphakamise umqondo wokwakha udonga olukhulu we-50km futhi wakhe "umgoqo oluhlaza" wezihlahla ukuze ziqukethe ukusabalala kogwadule.
Isomiso oPhondweni lwe-Afrika naseSahel ngeminyaka yama-70s, saqala ukuqala kwemibono yokunciphisa sonke lesi simo. Bekungekho kuze kube 2007, lapho i-African Union yavuma lo msebenzi lokho kuzowela lonke izwekazi, lisuke eSenegal liye eDjibouti. Iphrojekthi evusa amadlingozi, esafuna ukuvelela futhi esaqhubeka, kukhona labo abathi bangafaka umfutho omncane.
Ngabe kulungile ukushintsha i-ecosystem ngokuthanda?
Kungenzeka ukuthi yingxenye lapho, njengezikhathi eziningi kangaka, kubonakala khona lokho izenzo zethu zingaba nethonya elinamandla kokuthile okudalwe ngokwemvelo. ULouis Lavauden kungenzeka ukuthi wayeqinisile ngokukubiza ngokuthi "ukugwaduleka," kepha futhi manje siyazi ukuthi isimo sezulu singashintsha. Kuyagxekwa futhi. "Abasusayo" bathi, imvelo enempilo nemvelo ethonywe isimo sezulu, ayinakuthathwa njengohlobo lwesifo semvelo.
Enye impikiswano evelayo ukuthi uma lokhu empeleni kufanele kusho ukwenziwa ngcono kwezimo zokuphila kwabantu lapho, akuyona "into ejwayelekile" kakhulu. Lokho wukuthi, esikhundleni sokubamba inkinga, ukugxila, okwenziwayo ukudweba ipherimitha. Ngakolunye uhlangothi futhi kungafaneleka ngokwengeziwe ukuhlala ezindaweni ezinkulu, hhayi ulayini omude omude kangako. Umbono wokugcina kumele wengezwe ukuthi wawuzungeze iSahara yonke, yona kanye nezindawo eziluhlaza ezikhona ezenza "udonga" oluhlaza ngandlela thile.
Ngabe ezinye izindlela zingacatshangelwa?
Etafuleni kuhlale kunezindlela ezahlukahlukene zokusondela enkingeni efanayo. Enye yalezi zinketho inqubo esuselwa ekhonweni lomhlaba lokuvuselela izimbali ngokwalo. Kuyaziwa njenge inkumbulo yemvelo noma ukuvuselelwa kwemvelo okuphethwe ngabalimi. Izikhukhula nezilwane zingahambisa imbewu ziye ezindaweni lapho zingahluma khona. Izinhlelo zezimpande zezihlahla ezindala nazo zingakhiqiza amahlumela amasha. Lokhu kungaba yindlela ye- buyisela ukubukeka komhlaba ngendlela engokwemvelo futhi ngaphandle kwesidingo sokutshala izihlahla ngqo.
I-Afrika inezinketho, ezingaba khona, kepha ezimakwe kakhulu ngokuxhashazwa kwayo nokuguquka kwesimo sezulu. Udonga oluhlaza luyisithiyo, ibhuleki ongeke ukwazi ukubuyela emuva kulo. Kodwa-ke kutholakala, ngethemba lokuthi ekugcineni, kuzosebenza njengendawo ephelele. Ungabhala kuphi indaba entsha, egcwele impilo futhi engenamhlaba owomile.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Udonga olukhulu oluhlaza lwaseSahara olumelene nokugwaduleka
Ingqungquthela entsha Yesimo Sezulu izobanjelwa eBonn
Izinyathelo zokulwa nokuba sengozini kweSpain ekuguqukeni kwesimo sezulu